धमाधम मासु खान छोड्दै बेलायती नागरिक, दूधजन्य पदार्थ पनि छोडे, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
धमाधम मासु खान छोड्दै बेलायती नागरिक, दूधजन्य पदार्थ पनि छोडे
एजेन्सी। बेलायतका नागरिगको खानपिनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । एक रिपोर्टका अनुसार देशका हरेक ८ जनामा एक जना शाकाहारी छन् । कूल जनसंख्याको एक तिहाइ नागरिकले मासु खान छोडेका वा कम गरेका छन् । खानामा कुनै किसिमको पाबन्दी नगर्ने २१ प्रतिशत नागरिकले पनि शाकाहारमै जोड दिन्छन् । उनीहरु खास अवसरमा मात्र मासु खान्छन् ।
यहाँको एक सुपरमार्केट चेन भेट्रोसले गरेको अध्ययनअनुसार यहाँका नागरिकले माछामासुसँगै दूधजन्य उत्पादन पनि छोड्दै गइरहेका छन् । उनीहरुले पृथ्वीको वातावरणको संरक्षण गर्न यस्तो गरेका हुन् । अध्ययनअनुसार उनीहरुले धेरै जनावर हुँदा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढ्ने भएकोले जनावरको उत्पादन कम गर्न मासु र दूध छोडेका हुन् ।
पशुपन्छीजन्य खानेकुरा खान कम गर्दै गएपछि यसले पशुहरुको माग स्वतः कम हुने र पशुको संख्या घटेपछि कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन पनि कम हुने बेलायतीहरुको विश्वास छ । यसो गर्दा बिरुवाजन्य खानेकुराको माग बढ्छ । यसका लागि वनस्पति धेरै चाहिन्छ । वनस्पतिले कार्बनडाइअक्साइड लिएर खाना बनाइ अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने हुँदा यसले वातावरणको संरक्षण हुने उनीहरुको दावी छ ।